Ndingayifumana njani iPinterest ngaphandle kokuKhuphela? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingayifumana njani iPinterest ngaphandle kokukhuphela?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 385
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba iPinterest liqonga elinzima lokusebenzisa apho kungekho ithuba lokuba yenye ye abantu abaninzi abajongwa eqongeni. Nangona kunjalo, ngaphakathi kwinqanaba le-Intanethi, iindlela ezahlukeneyo zinokwenziwa ngaphandle kokubeka emngciphekweni ukugcinwa kwezixhobo.
Nangona kunjalo, namhlanje kukho iindlela ezininzi zokumisela ukuba iinkqubo ezithile zingasetyenziswa njani ngaphandle kwemfuneko yokuvula usetyenziso oluthile kwindawo leyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisiphene kubathandi bekhompyuter kunye nakwabo bafuna ukufumana izinto ezingcono ezigcina zonke izixhobo eziyingozi zikude.
Ke ngezantsi ungabona indlela yokuba nePinterest ngaphandle kokukhuphela usetyenziso, kunye nokonwabela iqonga ngaphandle kwengxaki. Konke oku kubulela kumzamo oqhubekayo wabasebenzi kwilizwe le-elektroniki.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ube nePinterest ngaphandle kokukhuphela?
Ukuphendula lo mbuzo, awunyanzelekanga ukuba uhlale kulo mbandela kakhulu kuba kunokwenzeka ukuba usebenzise iPinterest rhoqo eqongeni ngaphandle kokukhuphela usetyenziso. Enkosi kwezi ntlobo zeemeko abasebenzisi akufuneki bachithe ixesha elininzi ukususa ezinye izinto ukwenza indawo.
Ukongeza, kukho onke amathuba okuba iqonga lisebenza ngokugqibeleleyo ngaphandle komda. Ukunikwa konke oku, siza kukubonisa apha ngezantsi ukuba kanjani fikelela kwiqonga lePinterest ngaphandle kokukhuphela usetyenziso kwisixhobo se-elektroniki.
Ngaba iPinterest ithatha indawo eninzi?
Iphepha lePinterest alithathi sithuba sikhulu, eneneni into enokubangela ukusetyenziswa kokugcina zizikhonkwane ezigcinwe ngaphakathi kweqonga. Ngenxa yoku, umbono olungileyo kukugcina iifayile kwikhadi le-SD ukunqanda naziphi na iingxaki.
Amanyathelo okufumana iPinterest ngaphandle kokukhuphela
Ngoku, ayithathi msebenzi mningi ukufumana isibonelelo sokusebenzisa iPinterest phantsi komthetho wokungafumani ukugcwala ukugcinwa kwe-in-app. Ngenxa yoku, siza kukubonisa amanyathelo angezantsi ukuze ufunde ngcono kwaye ufumane amandla okuzomeleza ngeqonga.
Ngenisa iqonga lePinterest
Nokuba unobhaliso okanye awunalo, elinye lamanyathelo oza kuwalandela kukwenza i-imeyile kunye negama lokugqitha ukuze ukwazi ukufaka isixhobo. Kusenokwenzeka Qhagamshela idatha kwiakhawunti zikaGoogle okanye zikaFacebook.
Nje ukuba ufake idatha echanekileyo, uya kufumana iphepha eliqondisa kwakhona ukuze uqhubeke nemisebenzi ekulo.
Khetha i-affinities yakho
Akukho nto imnandi ngaphakathi kwePinterest kunokuba ukwazi ukukhetha yonke into ofuna ukuyibona, kwaye ekuqaleni iphepha likhuthaza ezi ntlobo zemisebenzi. Ke kuya kufuneka ufumane into oyithandayo kwaye uyisebenzisele inzuzo yakho.
Phina iPinterest kwifowuni yakho
Inyathelo lokugqibela, emva kokuhlaziya isixhobo sonke, kukuba nethuba lokukhangela useto lokukhetha: "Cofa kwiphepha eliphambili." Emva koko, unokufikelela ngokupheleleyo kwiphepha nangaliphi na ixesha losuku.
1 Ngaba kunokwenzeka ukuba ube nePinterest ngaphandle kokukhuphela?
1.1 Ngaba iPinterest ithatha indawo eninzi?
2 Amanyathelo okufumana iPinterest ngaphandle kokukhuphela
2.1 Ngenisa iqonga lePinterest
2.2 Khetha i-affinities yakho
2.3 Phina iPinterest kwifowuni yakho
Olona hlelo lubalaseleyo lokufumana ababhalisile kwiYouTube
Ndingayifumana njani iPinterest namhlanje?